Lalana ratsy : Mamboly vary ny Malagasy fa tsy mivoaka ny vokatra
dimanche, 17 mars 2019 22:49
Araky ny hitatsika amin'ny sary eto, ny faritra miloko mena dia mihinam-bary fa tsy mahavelon-tena ara-bary. Betsaka noho ny vary voleny ny vary hoaniny.
Ireo faritra miloko mavo no manana ambim-bokatra omeny ireo faritra mena.
4 millions tonnes ny filan'ny Malagasy rehetra vary isan-taona. Tsy ampy 400 000 tonnes eo isan-taona.
Izany hoe mihinam-bary 12 000 tonnes isan'andro izany isika.
Lanintsika indray andro sy tapany izany ny vary mora 16 500 tonnes nafarana.
Tsara ny asa sosialy satria mety misy olona tsy mihinam-bary noho ny tsy fananana. Vidio ny vary Malagasy dia zarao azy ireo. Aza manatavy ny tantsaha any Inde na Pakistan.
Simbain'io fanafaram-bary io ny tantsaha 80 % , nefa olona tsy misy 1 % fotsiny no hihinana io vary 16 500 tonnes io.
Aoka amboly vary, ary tandremo sodokan'ny resaka rendement masomboly vahiny fa misy izy ireny OGM, izany hoe mety hiteraka cancer ary mamindra amin'ny voly hafa, entin'ny rivotra, ny vorona, ny tantely.
Potika tanteraka ny fizahan-tany vao miditra eto io resaka OGM na ny génétiquement modifié. Na vary io, na katsaka, na voankazo, na hazo maniry.
Mety misy rendement ambony izy, fa ny Malagasy zatra mitahiry ny ampaham-bary vokatra atao masomboly, nefa ny voam-bary azo avy amin'ireny semence na masomboly vahiny ireny dia tsy azo volena, fa mila mividy sy manafatra avy any ivelany hatrany ianao amin'ny taom-pamokarana manaraka. Sady hian-kindoha amin'ny any ivelany izany no mila zezika simika manimba tany io semence vahiny io.
Ampiasao ny Fofifa fa betsaka ny masomboly mety eto amintsika.
- Ampio ny tantsaha amin'ny fampitaovana ;
- Hialao itony microcred mambotry amin'ny zanabola 72 % isan-taona itony, mody lazaina fa ambany 6 % ny zanabola alaina, nefa 6 % isam-bolana no resaka.
Tsy tokony hiaotra ny 5 % isan-taona ny zana-bola ;
- Manangana Banky Malagasy hanampy ny mpamokatra ;
- Amboaro ny fotodrafitrasa, misy priorité ny budget, ny investissements no tokony ambony noho ny fonctionnement, izay 85% n'ny tetibola ankehitriny fampandehanan-draharaha daholo;
- Itaro ny tany volena, omeo ireo tsy an'asa, toy isika mampindrana tany amin'ireo vahiny ;
- Amboaro ny lalana, ataovy pavé, ny vato feno, ny tsy an'asa feno, ampidiro Service National ireo rehetra tsy miasa;
- Ampiasao ny Injeniera sy Agronomes Malagasy ;
- Ampio ny tetik'asa PPI (Petit Périmètre Irrigué), ireny fanaovana barazy sy tatatra manondraka tanim-bary ireny, fanamboarana lalana kely sy tetezana amoaham-bokatra, izay andraisan'ny mpamboly anjara.
- Atoseho, mba tsy hilazako hoe soloy carte électronique ny vola na farafahatatsiny ny ampahany betsaka, fa ho voafehy ny kolikoly sy ny tsy fandriam-pahalemana, hitombo avo 5 heny ny vola miditra amin'ny fanjakana, azony ampiasaina amin'ny fanaovana tetik'asa hafa hampidiram-bola toy ny fitrandrahana ny harena ambonin'ny tany, ny fambolena hazo sy ny fitrandrahana ny hazo, ny harena ambanin'ny tany sy ny any an-dranomasina.
Heritaona dia tratratsika ny tsy fahampiam-bary, afaka 5 taona dia ampidi-bola vahiny 30 miliards de dollars ny sehatry ny vary fotsiny (jereo ny kajy tsotra hita amin'ny tableau).
Esory io toe-tsaina mangataka sy mizarazara io, tereo hiasa ny olona, akaro ny karamany sy ny motivation, ampio hivelatra ny orin'asa Malagasy na miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana.
Ataoko anaty parenthèse, foano io MID io dia fehezo ny vola Malagasy. Azo atao ny manao création monétaire ho an'ny investissements. Aza matahotra bailleurs vahiny izany. Alefaso mody izay mitabataba tsy faly.